Manchester United 3-0 Brentford: Ronaldo Oo Gool Dhaliyay Xili Ay Red Devils Xasuuqday Brenford
HomeWararka CiyaarahaManchester United 3-0 Brentford: Ronaldo oo gool dhaliyay Xili ay Red Devils Xasuuqday Brenford
May 3, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska 0
Manchester United ayaa guul 3-0 ah ka gaartay kooxda Brentford isniintii horyaalka Premier League markaasoo uu maamulaha ku meel gaadhka ah ee Ralf Rangnick uu kulankiisii ​​ugu dambeeyay ee garoonkiisa uu ku hogaamiyo.
Red Devils ayaa kulankiii ugu dambeeyey ee Old Trafford ciyaartay, waxaana laba ka mid ah dhaliyey xiddigaha reer Portugal ee Bruno Fernandes oo aftaxa ciyaarta lahaa iyo Cristiano Ronaldo halka uu midka saddexaadna ku daray Raphael Varane.
Ciyaarta oo sagaal daqiiqadood oo kaliya socotay ayuu Bruno Fernandes hoggaanka ugu dhiibay Manchester United kubbad uu dhinaca midig kasoo dhiibay Anthony Elanga oo uu goolka hortiisa u dhigay, taas oo uu xiddiga reer Portugal hal taabasho oo kaliya shabaqa ugu leexiyey.
Ka hor intii aan waqtiga nasashada loo bixin ayay Manchester United ciyaarta labaysay, waxaana gool qurux badan u dhaliyey Cristiano Ronaldo oo baas fiican ka helay Juan Mata, hase yeeshee dabbaal-degga markii uu dhamaystay ayaa VAR laga soo hubiyey, waxaana lagu wargeliyey in uu ka horreeyey ciyaartoyda kale oo uu offside ku jiray.
Cristiano Ronaldo ayaa rikoodhe loo dhigay daqiiqaddii 60aad markaas oo uu difaaca Brentford ee Henry oo dhabarka kaga yimid uu ku riday xerada ganaaxa, waxaana markiiba loo dhigay rikoodhe aanu muran ku jirin, taas oo uu Ronaldo gool u beddelay, ciyaartana kaga dhigay 2-0.
Goolkan ayaa ahaa midkii 18aad ee uu Ronaldo ka dhaliyey horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, waxaanu ku dhamaysanayaa isaga oo ah ciyaartoyga ugu goolasha badan kooxdiisa.
Difaaca reer France ee Raphael Varane ayaa madax ku qabtay kubbad koorne ahayd oo uu dhinaca bidix kasoo laaday Alex Telles, waxaanay ciyaartu sidaas ku noqotay 3-0.
Manchester United ayay ciyaartoydeedu sacabka u tumeen taageereyaasha markii ay ciyaartu dhamaatay, waxaanay in muddo ah dhex-taagnaayeen Old Trafford iyaga oo marba dhinac u dhex-socday maadaama ay ahayd kulankii ugu dambeeyey ee xilli ciyaareedkan ay ku dheelaan.
Red Devils waxay yeelatay 58 dhibcood iyada oo laba ciyaarood u hadhsan yihiin, waxaanay ku jiraan kaalinta lixaad iyaga oo shan dhibcood ka dambeeya Arsenal oo ay afar ciyaarood baaqi u yihiin.